အောင်သူငြိမ်း – ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ် ဘူမိဘော အလွန်၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး ရိုက်ခတ်နိုင်မှု | MoeMaKa Burmese News & Media
နောက်ပိုင်းတွင် ဆရစ် ထာနာရတ်က ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင်၊ ဖီးမာရှယ် ဖိဘွန်း ဆောင်ခရမ်ထံမှ အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးသည့် နောက်မှ ဘုရင်၏သြဇာအာဏာ စတင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သူက ဤသို့အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သည့် စစ်ဗိုလ်ချုပ် ဆရစ် ထာနာရတ်ကိုလည်း “မြို့တော်၏ ကာကွယ်ပေးသူတပ်မှူး”အဖြစ် ချီးမြှောက်ခဲ့သည်။ ဤနောက်ပိုင်းတွင် သူကဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို တိုးလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာ အကူအညီဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များ၊ သိပ္ပံပညာ စမ်း သပ်မှုများကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဗီယက်နမ်စစ်ဖြစ်လာပြန်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံက အနောက်နိုင်ငံများ၊ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်အဖို့ အဓိက ကွန်မြူနစ်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးမဟာမိတ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကွန်မြူနစ်စနစ် မပြန့်ပွားလာစေရေး အတွက် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဆင်းရဲမှု လျော့ချရေး အကူအညီများလည်း တိုး၍ ရရှိလာခဲ့သည်။ မိုးခေါင်ရေရှားဒေသများ တွင် ဘုရင်က မိုးအတုဖန်တီး၍ ရွာပေးသည်ကလည်း ကျေးလက်နေ လူထုများအဖို့ တန်ခိုးရှင်တစ်ပါးသဖွယ် ထင်မှတ်မှား စရာ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဘိန်းစိုက်နေကြသည့် တောင်သူများအတွက် အစားထိုးသီးနှံများ ဖန်တီးပေးသည်။ ဆည်များတည် ဆောက်ပေးသည်။ အခြေခံအဆောက်အဦ လမ်းပန်းထူထောင်ပေးသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်များ နောက်ပိုင်းတွင်တော့ နန်းတော်က ဦးဆောင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များ၏ အထွဋ်အထိပ်ကာလ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘုရင်က ချိုင်းဖတ်ထနာ ဖောင်ဒေးရှင်းကို ထူထောင်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အားသွန်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း ၂၀၀၀ ခုနှစ်များတွင်တော့ ဘုရင်က ချပြဆွေးနွေးသည့် မိမိဘာသာ ဖူလုံရေး စီးပွားရေးစနစ် (Self-sufficiency economy) သဘောတရားကိုပါ ပို၍ တိုးချဲ့ လာသည်။ သဘောတရား သင်ကြားပို့ချမှုများ၊ ဆွေးနွေးမှုများနှင့်အတူ လက်တွေ့စံပြလုပ်ကွင်းများပါ မြင်ခဲ့ကြရသည်။
ထိုမျှမက သွေးထွက်သံယိုဖြစ်ရပ်များစွာတွင် ဘုရင်က ပြည်သူပြည်သားတို့ဖက်က ရပ်တည် မပေးခဲ့ဟု ဆိုကြသူများ လည်း ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် “စစ်ပ်စီတူလာ” ဟု ခေါ်သည့် အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွင် ကျောင်းသားများစွာတို့ သွေးမြေခခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်က ဆာရစ်ကွယ်လွန် ပြီးနောက် စစ်အာဏာသိမ်းဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထနွန် ကစ်တီကာချွန် လက်ထက်ဖြစ်သည်။ စစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကို သမ္မာ ဆတ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများက ဆန့်ကျင် စိန်ခေါ်ကြသည်။ ဘုရင်က ကျောင်းသားများကို လူစုခွဲခိုင်းသည်။ လူစု မခွဲသည့် ကျောင်းသားများကို စစ်အစိုးရက ရဟတ် ယာဉ်များ၊ တင့်ကားများ၊ ခြေလျင်တပ်များဖြင့် ချေမှုန်းရာ ကျောင်းသား ၇၇ ဦးသေ၊ ၈၅၇ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ဤနေ့ကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် “ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်နေ့” ဟု သမိုင်းဝင် သတ်မှတ်ထားကြသည်။
၁၉၇၃ ခုနှစ်က ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုအပေါ် ဘုရင်က ထောက်ခံသည်ဟု ဆိုသော်လည်း၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လ ၆ ရက် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွင်မူ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ကျောင်းသားလှုပ်ရှားသူများက လည်း ကွန်မြူနစ်လိုလားသူများဟု စွပ်စွဲ၍ ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်သည့် ချေမှုန်းမှုများ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘုရင်ထောက်ခံထား သည့် ကျေးရွာကင်းထောက်တပ်ဖွဲ့များ၊ ပြည်သူ့စစ် လက်နက်ကိုင်များက ကျောင်းသားများကို ရက်စက်စွာ သုတ်သင် ချေမှုန်းခဲ့ကြသည်။ အစိုးရသတင်းများအရ ကျောင်းသား ၄၆ ဦးသေ၊ ၁၆၇ ဒဏ်ရာရကာ ကျောင်းသား ၃၀၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ အချို့ရင်းမြစ်များက သေဆုံးသူ ရာကျော်မည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဤအဖြစ်ကို “ထိုင်းလူထုများ၏ စုပေါင်း စိတ်အနာဒဏ်ရာ” အဖြစ် ဖော်ပြကြသည်။
အခုကာလက ယခင်အခြေအနေမျိုး ပြန်၍ မရှိနိုင်တော့ဟု သုံးသပ်သူများက ဆိုကြသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ကြန်အင် လက္ခဏာဟု သတ်မှတ်ဖော်ပြကြသည့် “ဘုရင်-သာသနာ- နိုင်ငံတော်” အယူအဆမှ တစ်ပါးကွယ်ခဲ့ရပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုမျှ မက ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အာဏာအခင်းအကျင်းဖြစ်သော “ဘုရင်-တပ်မတော်- ဗျူရိုကရက်များ” ထိန်းညှိမှုတွင်လည်း တစ်ပါး ကွယ်ပျောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ဤအတွက်ကြောင့်လည်း ဘုရင်အလွန် အာဏာချိန်ခွင်လျှာ ပြန်ညှိမှု၊ သို့မဟုတ် အင်အားစု အသီးသီး၏ ထကြွလာမည့် အကျိုးစီးပွားများမှသည် ထိပ်တိုက်တွေ့မှု ဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်နေကြသည်။ ထိုမျှမက ဘုရင် အနေဖြင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်း အစေးကပ်စေသည့် အင်အား (binding power) ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ရာ၊ ဘုရင်အလွန် ကာလ ညီညွတ်ရေးပြိုကွဲမည့် အရေးလည်း ပူပန်ကြသည်။
သေချာသည်ကတော့ အိမ်ရှေ့မင်းသားမှ ဘုရင်ဖြစ်လာမည့်သူအနေဖြင့် ဖခမည်းတော်ကဲ့သို့ လူထုချစ်ခင် ထောက်ခံမှု မရရှိနိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချူလာလောင်ကောင် တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ပါမောက္ခ သစ်ထိနန် ပုန်ဆက် ဟီရတ် (Thitinan Pongsudhirak) ကတော့ “ဘုရင် ဖူမိဖွန် အဒူရာဒက် မရှိတော့သည့် ထိုင်းနိုင်ငံကို ပထမဦးဆုံး ကြုံ ကြရတော့မည်၊ ယခင်အမေရိကန်မှ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဂျွန် အက်ဖ် ကနေဒီ ကွယ်လွန်ပြီးကာလ အခြေအနေမျိုး၊ ဆိုဗီယက် ယူနီ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗလာဒီမာ လီနင်၊ တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် မော်စီတုန်း၊ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှ နယ်လ် ဆင်မင်ဒဲလားတို့ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် အခြေအနေမျိုး” ဟု သူက တင်စားသည်။
၁။ Pongsudhirak. T (2016 October 17). “Thailand as we knew it is now at an end”. Bangkok Post.